Kantipur-अल बिदा शशि कपुर - कान्तिपुर समाचार
अल बिदा शशि कपुर
मंसिर १९, २०७४ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं — बाल कलाकारबाट अभिनय यात्रा थालेर पूरा करिअर बलिउड र केही अंग्रेजीभाषी गरी १ सय ५० फिल्म खेलेका अभिनेता शशि कपुरको ७९ वर्षको उमेरमा सोमबार साँझ निधन भएको छ ।
तीन सातादेखि मुम्बईको अस्पतालमा उपचाररत कपुर पछिल्लो समय मृगौलासम्बन्धी रोगका कारण अस्वस्थ थिए । सन् २०१४ मै उनको छातीमा इन्फेक्सन देखिएको थियो भने त्यसअघि नै बाइपास सर्जरी गरिएको थियो । उम्दा अभिनेता पृथ्वीराजका कान्छा छोरा शशिका दुई दाजुहरू राज र शम्मीको पनि निधन भइसकेको छ । दादा साहेब फाल्के र पद्मभूषण पुरस्कारद्वारा सम्मानित शशिको निधनप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि बलिउडका लगभग सबैजसो सेलेब्रिटीसम्मले गहिरो दु:ख प्रकट गरेका छन् ।
बुबा पृथ्वीराज निर्देशित नाटकबाट अभिनय थालेका शशिले सन् १९४० को दशकमा बालकलाकारका रूपमा फिल्म पनि खेले । शशिलाई सुरुआती चरणमा विशेषत: ‘आग’ (१९४८) र ‘आवारा’ (१९५१) ले चिनाएका थिए । १९६१ को ‘धर्मपुत्र’ ले उनलाई अभिनेताका रूपमा ख्याति दिलाएको थियो । ट्रेडमार्क मुस्कानका कारण बढी चर्चित उनले पूरा करिअरमा ६१ फिल्ममा लिड हिरोका रूपमा खेले भने ५५ मल्टिस्टार फिल्ममा देखिए । शशिले १९६३ मा पहिलो पटक ‘हाउस होल्डर’ नामक विदेशी फिल्म र त्यसपछि ‘वल्लाह’ मा अभिनय गरेका थिए ।
६० को दशकदेखि ८० को मध्यसम्म चर्चाको शिखरमा रहेका शशिको बलिउडमा राखी, हेमा मालिनी र जिनत अमानसँगको जोडी खास जम्थ्यो । शशिले अमिताभ बच्चनसँग एक दर्जन फिल्ममा सँगै काम मात्रै गरेनन्, उनीहरूको टिमअप लोकप्रिय पनि थियो । ‘काला पत्थर’, ‘सुहाग’ र ‘शान’ अमिताभ–शशि अभिनित फिल्म निकै हिट भएका थिए ।
शशिलाई आज पनि ‘दिवार’ मा को–एक्टर अमिताभ बच्चनलाई भनेको ‘मेरे पास माँ है’ का कारण सम्झने धेरै छन् । क्रिकेटर वीरेन्द्र सहवागले पनि ट्वीटरमा सोही डायलगमार्फत शशिको निधनप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् । अमिताभसँगैको अर्को फिल्म ‘कभी कभी’ बाट भने उनी शीर्षगीत ‘कभी कभी मेरे दिल में...’ का कारण बढी चर्चित भए । अमिताभ र निर्देशक यश चोपडासँग शशिको सहकार्य त्यस बखत ‘दिवार’, ‘कभी कभी’ र ‘त्रिशूल’ बाट अत्यधिक सफल रहेपछि ‘काला पत्थर’ मा दोहोरिएका थिए । ‘काला पत्थर’ फिल्म फेयर अवार्ड्समा आठ विधामा मनोनयनमा परेको थियो । १९८६ मा उत्कृष्ट अभिनेताको राष्ट्रिय अवार्ड भने शशिलाई ‘न्यु दिल्ली टाइम्स’ ले दिलाएको थियो । त्यो फिल्ममा उनी एक आदर्शवादी पत्रकारको भूमिकामा देखिएका थिए ।
‘उहाँको उत्कृष्ट अभिनयलाई आगामी कैयौं पुस्ताले पनि सम्झिरहनेछ । उहाँको निधनका कारण मलाई गहिरो दु:ख लागेको छ । परिवार र प्रशंसकप्रति समवेदना,’ भारतीय प्रधानमन्त्रीले ट्वीटेका छन् । अमिताभले भने सोमबार राति अबेरसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । आमिर खानले बिना क्याप्सन शशिको श्यामश्वेत तस्बिर ट्वीट गरेका छन् ।
विख्यात गायिका लता मंगेशकरले पनि ट्वीटमा लेखेकी छन्, ‘मलाई भर्खरै थाहा भयो, गुणी अभिनेता शशि कपुरजीको आज स्वर्गवास भएछ । यो सुनेर मलाई निकै दु:ख लागेको छ । उहाँ असाध्यै राम्रो मान्छे हुनुहुन्थ्यो । विनम्र श्रद्धाञ्जली ।’ त्यसैगरी अजय देवगण, विपाशा बसु, सुस्मिता सेनलगायतले पनि दु:ख व्यक्त गरेका छन् ।
जेनिफर केन्डलसँग विवाह गरेका शशिका दुई छोरा कुनाल र करण तथा छोरी सञ्जना छन् ।
२. कभी कभी
३. काला पत्थर
४. न्यु दिल्ली टाइम्स
७. सत्यं शिवं सुन्दरम्
१०. नमक हलाल
११. इन कस्टडी